Xogsoor News Network – Page 2 – Just another WordPress site
Maamulka Puntland oo u xuubsiibtay Dowlada Daris la,ah dalka Somaliya kadib
Madaxweyne Axmed Madoobe oo Dhoobley kula kulmay saraakiisha Ciidamada Daraawiishta.
Dal kamid ah Qaarada Yurub oo Qofkii ugu horeeyay u geeriyooday Cudurka Coronavirus
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa digniin u dirtay Maraakiibta sida sharci darrada ah biyaha dalka uga kalluumeysta. Wasiirka kalluumeysiga iyo Khayraadka badda, Xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa digniin u diray Maraakiib laga leeyahay Waddamada Iiraan iyo Pakistan oo si sharci darro ah uga kalluumeysta biyaha dalkeenna. Waan uga digeyntaa maraakiibtaasi inay […]
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye, ayaa shir gudoomiyey shirka Golaha Amniga Galmudug, kaasi oo ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka. Kulankii 8aad ee shirka Golaha amniga waxaa kasoo qayb galay dhammaan xubnaha Golaha, waxaana laga dhagaystay warbixin ku saabsan qorshahooda dhanka amniga iyo siyaasadaha gacan siiya […]
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in goor dhaw halkaasi lagu dilay darawal Mooto Bajaaj oo saaka soo shaqo tagay. Dilka darawalkaan Mooto Bajaajta ayaa waxaa uu ka dhacay Xaafadda Saybiyaano ee Degmada Hodan, kadib markii shaqsi ay wada murmeen uu toogashadan gaystay. Darawalka Mooto Bajaajta & ruux watay […]
Wafdi kooban oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Guddiga caleema saarka Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka ayaa soo gaaray Magaalada Dhuusamareeb. Waxaana garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wasiiro iyo xubno ka tirsan Guddigaan iyo maamulka Caasimada. Ujeedada imaanshiyaha guddigan ayaa ah qiimeyn iyo sahmin tasiilaadka loo baahanyahay […]
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadis uu Wasiirka Maaliyada maamulkiisa ku sameeyay Agaasimihii Wasaaradaas Khadiijo Shiikh Axmed. Waare ayaa soo saaray Wareegto uu isugu yeerayo dhamaan shaqaalaha Wasaarada oo Wasiirka uu ku jiro 16-ka Maarso 2020. Wasiirkii hore ee Maaliyada Hirshabelle ayaa […]
Dalka Shiinaha oo ah wadankii ugu horeeyay ee uu ka dilaacay xanuunka corona ee hataan dunida ku faafay ayaa ka hadlay dalka uu ku tuhmayo in uu ka dambeeyay faafidda xanuunka corona. Wakalaadda wararka ee Reuters ayaa warisay in afhayeenka Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Shiinaha, Zhao Lijian uu bartiisa Twiter-ka […]
Ammaanka caasumada Puntland ee Garoowe ayaa la adkeeyey ciidamo dheeraad ah ayaa lagu kordhiyey sugida Amniga caasumada, iyadoo laga taxadarayo adkeynta ammaanka shirka wadatashiga Puntland oo ka dhacaya magaalada 15-ka bishan socona doona mudo sadex maalmood, kaas oo ay iskugu imaan doonaan marti sharaf kala duwan oo la casumay. Ciidamada […]
Waxaa sii badaneysa cabsida ay Xubnaha mucaaradka ah ka qabaan waqti kororsi ay dooneyso Dowladda Soomaaliya halkii doorashada lagu qaban lahaa waqtigeeda. Ra’isulwasaarihii hore ee Soomaaliya, sidoo kalana soo noqday Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay rajada laga qabo inay dalka ka dhacdo Doorasho waqtigeeda ku timaado. […]
Xildhibaan Amiin jeesow oo kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa sheegay in xiisada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya iyo dagaalkii ka dhacay xaduudka uu saameyn ku leeyahay muranka badda ee u dhaxeeya labada dowladdood. Xildhibaanka oo la hadlayay BBC-da ayaa waxaa uu sheegay in Kenya ay sicad ugu soo xadgudubtey […]
Dowladda Kenya ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horeeyey ee cudurka halista ah ee Coronavirus oo laga helay dalkeeda. Xoghayaha Golaha Wasiirada Kenya Mutahi Kagwe ayaa Maanta oo Jimco ah xaqiijiyey in qofka laga helay cudurkaan uu yahay nin u dhashay dalka Kenya oo ka imaaday Mareykanka soona maray Ingiriiska. Xoghayaha ayaa sheegay […]